Faah faahin:- Israsaaseyn dhex-martay ciidamada NISA iyo illaaalada madaxtooyadda – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Israsaaseyn dhex-martay ciidamada NISA iyo illaaalada madaxtooyadda
Israsaaseyn muddo kooban socotay una dhaxeeysay ciidamo ka tirsan NISA iyo Illaalada xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa caawa ka dhacday agagaarka xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka socotay xaflada xuska 15-ka May.
Goob-joogayaal la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in israsaaseynta ay ka bilaabatay muran soo kala dhex-galay illaalada xarunta madaxtooyadda Soomaaliya oo goobtaasi u tagtay inay sugaan ammaanka iyo ciidamo uu watay taliyaha nabad-sugidda NISA ee gobolka Banaadir Korneel Saadaq Cumar, oo rabay inay goobtaasi gudaha u galaan.
Illaa 2 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inay israsaaseyntaasi ku dhinteen, iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay.
Xaaladda goobta ay israsaaseyntu ka dhacday ayaa noqotay mid aad u kacsan, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamo kale oo labada dhinac kala dhex-galay, iyadoona xaaladda goobtaasi ay markii dambe caadi noqotay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo xilligii ay israsaaseyntu dhaceeysay ka maqnaa goobta ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo uu goobtaasi gaaro, si uu uga qeyb-galo xafladda xuska 15-ka May oo haatan si toos ah halkaasi uga socoto.